इनर्जेटिक र कन्फिडेन्ट(Energetic and Confident) ले मिस एसइइ(MISS SEE)को उपाधि चुमेकी अस्मिताको नेत्ररोग विशेषज्ञ बन्ने लक्ष्य - Citypokhara
२०७४ आषाढ १० , शनिबार
नेपालमा महिला र पुरुषको आन्तरिक र वाह्य क्षमता प्रस्फुटन गर्ने उद्देश्यले विभिन्न खालका व्यूटी तथा हेन्सम प्रतियोगिताहरु महिनै विच्छे हुने गर्छन भन्दा फरक पर्दैन् । यस्तै पोखरामा पनि माध्यमिक शिक्षा परिक्षा (SEE) दिएर बसेका छात्राहरुलाई सवल, सक्षम बनाई उनीहरुका प्रतिभा तथा कलालाई प्रस्फुटन गराउने उद्देश्यले ‘न्यू लुक्स कस्मेटिक मिस एसइइ २०१७’ सम्पन्न भएको छ । सो प्रतिस्पर्धामा अस्मिता योगीले उपाधि चुमेकी छन् ।
ईभेन्टस फर यु प्रा.लि.को आयोजना, सारेगम इन्टरटेन्मेन्ट हाउसको सहकार्य तथा लायन्स क्लब अफ व्युटी सिटिको विशेष सहयोगमा आयोजित “मिस एसइइ”को फस्ट रनर अफ ईशा श्रेष्ठ र सेकेण्ड रनरअफ सलमा भाट बने ।
विशेष गरी यस्ता व्यूटी प्रतियोगिताका विजेतालाई ग्ल्यामरको बजारले फरक र सकरात्मक आशा सहित हेर्ने गरेको पाईन्छ । यसै सन्दर्भमा उपाधि जित्न सफल अस्मिता योगीसँग सिटीपोखरा डट कम(citypokhara.com)ले गरेको कुराकानीको अंशः–
अस्मिता जी, बधाई छ तपाईलाई,मिस एसइइको उपाधि जित्नुभयो, एसइइ पनि ए ग्रेड ल्याएर उत्तिर्ण हुनुभयो ।
१७ जनाको भीडवाट उपाधि आफ्नो पोल्टामा पार्दा कस्तो अनुभव भएको छ ?
एकदमै रमाईलो लागेको छ । आई एम फिलिङ्ग प्राउण्ड (I’m Feeling Proud), मेरो वीश(Wish) पुरा भयो ।
जव कन्टेस्टमा आउनुभयो त्यो वेला लागेको थियो, मिस एसइइको उपाधि जित्छु भनेर ?
मलाई के लागेको थियो भने आफुले वेष्ट(Best) दिन सक्यो भने वीनर(Winner) हुन्छु जस्तो लाग्थ्यो । सकरात्मक सोचेर नै अगाडी बढ्ने हो, त्यहि भएर सकरात्मक सोच्यो भने पछि निश्चय नै राम्रो हुन्छ ।
तपाई कुनै मुभमेन्टमा यो कारणले उपाधि गुमाउछु कि भन्ने त लागेन?
ट्रेनिङ्ग सेसन(Training Session)को फस्ट डे (1st Day)बाट नै म अरु भन्दा एकदमै एक्टिभ(Active) थिए । धेरै बोल्ने, नडराउने थिए । तर ट्यालेण्ट सो(Talent Show) को दिन एकदमै आत्तिए । म आत्तिनुमा पनि मेरो आफै व्यक्तिगत रिजन थियो । अनि त्यस दिनमा आफुले चाहे जस्तो,सोचेको जस्तो ट्यालेण्ट सो(Talent Show) गर्न सकिन । त्यो दिन मेरो होप डाउन(Hope Down) भएको थियो ।
जतिवेला होप डाउन(Hope Down) भयो त्यो बेला कन्टेस्ट(Contest)मा किन आए होला भन्ने सोच्नुभएन ?
मलाई लाग्यो । म त्यस्तो दुर्गम ठाउँ कालीकोटबाट आफ्नो ठाउँलाई इन्ट्रो(Intro)गराउँछु भन्ने उद्देश्य बोकेर आए । अनि आफ्नो दुर्गम ठाउँलाई इन्ट्रो(Intro)गराउने मौका पाएको छु । केहि त गर्छु म वीनर(Winner) भएपछि भन्ने सोचेकी थिए तर जव मेरो ट्यालेण्ट सो(Talent Show) सोचेजस्तो भएन र म त्यो बेला चाँहि एकदमै आत्तिए कि मेरो उद्देश्य पुरा गर्न सक्दिन की भनेर ।
के सिक्नुभयो मिस एसइइ(MISS SEE)मा सहभागि भएर ?
हाम्रो लागि महत्वपूर्ण नै एजुकेशन(Education) हो । १० कक्षासम्म हाम्रो माइण्ड एजुकेशन(Education)मै फोकस(Focus)हुन्थ्यो, एजुकेशन(Education) बाहेक अन्त कतै इन्भल्भ(Involve) हुन पाएको थिएन । एसइइ(SEE) भनेपछि होस्टल, ट्युसन सबै कुरा म्यानेज गर्नुपर्ने थियो । यस्तो केहि पनि थाहा थिएन । जव म यहाँ आए एकदमै धेरै कुरा सिके । माइक कसरी समात्नेदेखि लिएर पव्लिक स्पिकिङ्ग(Public Specking), पर्फमेन्स(Performance) कसरी शो गर्ने, बस्दा कसरी बस्ने, खादा कसरी खाने, हिड्दा कसरी हिड्ने त्यस्तो हरेक कुराको ज्ञान हामीलाई दिनुभएको छ, हाम्रो अर्गनाईजर टिम(Organizer Team)ले । त्यस्तै मोटिभेसन क्लास(Motivational Class)अनि एजुकेशन क्लास(Educational Class) पनि हामीले लियौ । त्यस्तै फेसन चेन्ज, ड्रेसिङ्ग चेन्ज देखि लिएर हरेक कुरामा जति पनि अर्गनाईजरहरुले सिकाउनुभएको छ । त्यसको नाईन्टि फाईव पर्सेन्ट(95 %) मैले एसेप्ट(Accept) गरेको छु जस्तो लाग्छ ।
तपाई कसरी वीनर(Winner) हुनुभयो ? आफ्नो पर्फमेन्स(Performance), भोटिङ्ग सिस्टम(Voting System) या बढी टिकट(Ticket) बिकाएर ?
मेरो इनर्जेटिक र कन्फिडेन्ट लेवल(Energetic and Confident Level) ले गर्दा म वीनर(Winner) भए । किनभन्दा मैले आफैले भन्छु टप टेन(Top Ten)मा मेरो एन्सर(Answer) अरुको भन्दा सट एण्ड स्वीट(Short And Sweet) भएको थियो । तर मेरो जस्तो मेरो जस्तो इनर्जेटिक र कन्फिडेन्ट लेवल(Energetic and Confident Level) अरु साथीहरुको भएको थिएन् ।
उपाधि जित्नुभयो, श्रेय कसलाई दिनुहुन्छ ?
म पहिलो थ्यांक्स(Thanks) चाहिँ गड(God)लाई दिन चाहान्छु । किनभने म सुन्दर नेपालमा जन्मिन पाए । त्यसपछि मेरो फ्याम्ली(Family), अर्गनाईजर टिम(Organizer Team), सर्पोटर(Supporter), साथीहरु(Friends) सबै जनालाई ।
व्युटि पिजेन्ट(Beauty Peagent)मा लाग्ने सोख तपाईमा कहिलेदेखि पलायो ?
कक्षा ३ मा पढ्दा मिस टयान्लेण्ड कन्टेस्ट(Miss Talent Contest)मा भाग लिएकी थिए त्यसमा मैले वेष्ट ड्रेस(Best Dress)को अवार्ड पाएकी थिए । त्यो कन्टेस्ट(Contest)मा मुस्कान रानाभाट वीनर(Winner) हुनुभएको थियो । उहाँले क्राउन(Crown) लगाउदा मलाई पनि एकदमै वीनर(Winner) भएर क्राउन(Crown) लगाउन मन लाग्यो र त्यो वेला ममिसँग वाचा नै गरे कुनै दिन यस्तै क्राउन(Crown) लगाउँछु भनेर, र त्यो बेलादेखि नै मेरो ड्रिम(Dream) बन्यो कुनै व्युटि पिजेन्ट(Beauty Peagent)को टाइटल होल्ड(Title Hold) गरेर आफ्नो ठाउँलाई रिप्रिजेन्ट(Represent) गरौं भन्ने ।
महिला सशक्तिकरणको लागि यस्ता इभेन्टहरुले कस्तो भूमिका खेल्छन् जस्तो लाग्छ ?
यस्ता व्युटि पिजेन्ट(Beauty Peagent)ले कन्फिडेण्ट लेवल(Confident Level) बढ्छ । त्यो कन्फिडेण्ट लेवल(Confident Level) ले एक महिलाले अरु महिलाहरुलाई अवेर(Aware) गराउनुभयो भने महिला सशक्तिकरणमा ठुलो योगदान हुन्छ । भनिन्छ नी, घरमा आमा शिक्षित हुनुभयो भने सन्तान शिक्षित हुन्छन भनेर, त्यस्तै एक महिलाले धेरै महिलालाई अवेर(Aware) गराउन सक्नुहुन्छ ।
कालिकोट र पोखराको बसाईँमा तपाईको अनुभव?
हुन त मेरो जन्म कालिकोट हो तर म पोखराकै वातावरणमा हुर्के रमे तर म पोखरामा वसेर पढे पनि परिक्षा दिन म कालिकोट नै जान्थे । मैले एसइइ(SEE) पनि कालिकोटबाटै ए ग्रेड ल्याएर उतिर्ण गरे । हुन त कालिकोट भन्दा पोखरा धेरै सुगम ठाउँ हो । तर मलाई कालिकाट नै मन पर्छ । तर पोखरा बसेर कालिकोट जादा मलाई सेटल हुन एकदमै गाह्रो हुन्छ । कालिकोटमा भन्दा कास्की धेरै डेभलप(Develop) भएको जिल्ला हो । कालिकोटमा पोखराको भन्दा खाना नै फरक हुन्छ भने अन्य सेवा सुविधा कमै छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, यातायात, खाने पानी, बत्ति लगायत धेरै पक्षहरुको अभाव छ, तर फ्यासिलिटिज(Facilities) नभए पनि मलाई कालिकोट नै प्यारो लाग्छ ।
भावी पुस्ताको लागि सुझाव के छ ?
भावी पुस्ताको लागि म के भन्न चाहान्छु भने सधैं ठूलो सपना लिनु, मुटु र आँखामा आकांक्षाहरु लिनु, आत्मविश्वासी हुनु, कडा परिश्रम गर्नु अनि बल्ल आफ्ना सपना पूरा हुन सक्छ ।
पहिला त म मेरो पढाईमा ध्यान दिन्छु । किनकि म म साइन्स पढेर मलाई भविष्यमा सफल र सन्तुष्ट नेत्र रोग विशेषज्ञ बन्ने लक्ष्य छ । म मेरो जन्मभुमि कालिकोटका गरिव तथा असहाय व्यक्तिहरुलाई नि:शुल्क उपचार सेवा दिनेछु भने सम्भव भएसम्मका स्थानमा थोरै लगानीमा आँखा शिविरहरु सञ्चालन गर्नेछु । यस बाहेक सोसल वर्क(Social work)गर्नेछु जुन म ममिबाट इन्सपायर(Inspire) भएको हो र मैले यत्रो उपाधि जितेपछि मोडलिङमा पनि आएको अफर(Offer)हरु म युज(Use) गर्छु ।